Dataset များ (13)
ကမ္ဘောဒီးယား (31) ထိုင််း (25) ဗီယက်နမ် (21) လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရ... (20) မြန်မာ (18) ဘရူနိုင်းဒါရုဆလင် (10) အင်ဒိုနီးရှား (10) မလေးရှား (10) ဖိလစ်ပိုင် (10) စင်္ကာပူ (10) တရုတ် (9) ကိုကိုး (ကီးလင်း) က... (8) ခရစ္စမတ်ကျွန်း (8) ဟောင်ကောင် (8) အိနိ္ဒယ (8) ဂျပန် (8) ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်... (8) ကိုရီးယားသမ္မတနိင်ငံ (8) သီရိလင်္ကာ (8) မွန်ဂိုးလီးယား (8) တီမော လက်စ်တေ (8) Global (4)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (45) ခမာဘာသာစကား (4) လာအို (1) ဗမာဘာသာစကား (1) ထိုင်း (1)
PDF (22) HTML (14) WMS (8) SHP (6) CSV (4) DB_TABLE (3) JPEG (3) XLSX (3) GeoJSON (2) KML (2) geotiff (1) GeoTIFF (1) JSON (1) mrc (1) PNG (1) sqlite (1) SQLITE (1) URL (1) XML (1)
Open Development Me... (24) Open Development Ca... (13) Open Development Th... (6) Open Development Laos (2) Open Development Vi... (2) Open Development My... (1)
SDG6Clean water a... (48) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (17) ရေအရင်းအမြစ်များ (12) Sustainable develop... (6) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (5) ကျေးလက်ရေရရှိမှုနှင... (4) မြို့ပြရေရရှိမှုနှင... (4) မြို့ပေါ်ရေထောက်ပံ့... (4) ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ... (4) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (2) ရေလွှမ်းမိုးမှုများ (2) ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအ... (2) ကျေးလက်ရေထောက်ပံ့မှု (2) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (2) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (2) ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခ... (2) အရွယ်ရောက်ပြီးသူမျာ... (1) သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင... (1) စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု (1) ကျား၊မ သဘော (1) ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည... (1) လူဦးရေနှင့် သန်းခေါ... (1) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (1) SDG 10 Reduce inequ... (1) SDG 11 Sustainable ... (1) SDG4Quality educa... (1) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆို... (1) ရေထုညစ်ညမ်းမှု (1) ကမ္ဘာ့ဘဏ် (1)
unspecified (23) CC-BY-SA-4.0 (7) License not specified (6) CC-BY-3.0-IGO (5) Creative Commons At... (2) Creative Commons At... (2) CC-BY-4.0 (1) CC-BY-NC-SA-3.0 (1) Open Data Commons A... (1)
ခေါင်းစဥ်များ: SDG6 Clean Water and Sanitation
ကမ္ဘောဒီးယား, လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ, မြန်မာ, ထိုင််း, ဗီယက်နမ် 2021၊ 28 မေ ရင်းမြစ်: Lehner, B. and Döll, P. (2004): Development and validation of a... ရေအရင်းအမြစ်များ, သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဇီဝမျိုးကွဲများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
ကမ္ဘောဒီးယား 2018၊ 29 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: Annual report 2017 of Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ, ရေအရင်းအမြစ်များ
The dataset shows about the coverage of clean water supplied by Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) in Phnom Penh and the surrounding areas for the current situation and...
ကမ္ဘောဒီးယား 2021၊ 8 ဧပြီ ရင်းမြစ်: https://washdata.org/data/household#!/ ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ
ကမ္ဘောဒီးယား Archived web content ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ
The WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (JMP) isaplatform that reports the country, regional and global estimates of progress on...
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ 20/gov အမိန့် 2021၊ 20 ဇန်နဝါရီ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု, ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ဆည်များ
This decree sets out the rule of principles, and measures management, monitoring, reservoir affairs, explore, create an account, and watershed management plan, assess and...
Global 2021၊ 15 ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Global Surface Water (https://global-surface-water.appspot.com) ရေလွှမ်းမိုးမှုများ, ရေအရင်းအမြစ်များ
ထိုင််း 2021၊ 15 ဇန်နဝါရီ ရင်းမြစ်: Deltares Aqua Monitor (http://aquamonitor.deltares.nl) ကျေးလက်ရေထောက်ပံ့မှု, ရေလွှမ်းမိုးမှုများ
မြန်မာ 2020၊ 12 နိုဝင်ဘာ ရင်းမြစ်: Ministry of Labour, Immigration and Population... လူဦးရေနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း, အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏ စာတတ်မြောက်မှု
ဤအချက်အလက်အစုအဝေးတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ သိရှိရသော ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေစားရင်းများပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် မြို့ပြနှင့် ကျေး...
ထိုင််း Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Kingdom of Netherlands 2016 မြို့ပြရေရရှိမှုနှင့် မိလ္လာရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းကိစ္စများဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ, ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) master plan (2015-2021)
ကမ္ဘောဒီးယား 2020၊ 10 ဩဂုတ် ရင်းမြစ်: Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA),... မြို့ပေါ်ရေထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖြန့်ဝေမှု, ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ တိုးတက်စေရန်အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှု
This data shows the Master Plan for the period 2015-2021 in order to allowasustainable expansion of the Greater Phnom Penh Water Supply System (GPPWSS). The data shows the...
Global Archived web content UN-WATER ကျား၊မ သဘော, ရေအသုံးပြုမှု မူဝါဒ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး
ကမ္ဘောဒီးယား 2019၊ 26 မတ် ရင်းမြစ်: OCHA Service: Humanitarian Response https://www.humanitarianresponse.info ကျေးလက်ရေရရှိမှုနှင့် မိလ္လာရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းကိစ္စများဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ
Lack of water and sanitation is one of the biggest issues affecting the health of children across Cambodia, particularly those who live in the countryside. This dataset shows...
Global Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) World Health Organization, United Nations Children's Fund 2017 ရေအရင်းအမြစ်များ
WHO and UNICEF established the Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene in 1990, and published regular global updates throughout the Millennium...
Global 2019၊ 17 ဒီဇင်ဘာ ရင်းမြစ်: World Health Organization ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ဗီယက်နမ် Archived web content Zita Sebesvari, Fabrice Renaud 2017 ရေထုညစ်ညမ်းမှု, ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်ခြင်း
This article discusses the water situation in Vietnam's Mekong Delta. It discusses water quality, water sources, current research, educational gaps and how communities respond...
Water treatment plant in Phnom Penh
ကမ္ဘောဒီးယား 2018၊3အောက်တိုဘာ ရင်းမြစ်: Annual report 2017 of Phnom Penh Water Supply Authority (PPWSA) မြို့ပေါ်ရေထောက်ပံ့မှုနှင့် ဖြန့်ဝေမှု, မြို့ပြရေရရှိမှုနှင့် မိလ္လာရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းကိစ္စများဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ
This dataset shows the locations of water treatment plant in Phnom Penh which are under the operation of Phnom Penh Water Supply Authority. There are4locations in this dataset...
ကမ္ဘောဒီးယား Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations) Water and Sanitation Program, World Bank 2013 ကမ္ဘာ့ဘဏ်, ကျေးလက်ရေရရှိမှုနှင့် မိလ္လာရေဆိုးစွန့်ပစ်ခြင်းကိစ္စများဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အဦများ
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ Archived web content World Health Organisation ရေနှင့် မိလ္လာရေဆိုးကိစ္စများ
SDG6Thailand: Clean Water and Sanitation
ထိုင််း Archived web content UNDP
Brief summary of SDG6by UNDP Thailand.
ထိုင််း Archived web content Government of Thailand 2018 ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု